XOG:- Farmaajo iyo Kheyre oo maanta cabsi aawgeed utagi waayay xuska xasuuqii isgoyska Soobe. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
XOG:- Farmaajo iyo Kheyre oo maanta cabsi aawgeed utagi waayay xuska xasuuqii isgoyska Soobe.
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa ka baaqday inay ka qeyb galaan sanad guuradii 2-aad ee xasuuqii ka dhacday Isgoyska 14 October ee ay boqolaalka qof ku geeriyooday qaraxii labo sano ka hor.
Madaxda Villa Soomaaliya, ayaa sababo amni uga baaqday sanad guuradaas, sida ay Puntland Post u sheegeen saraakiil katirsan madaxtooyada Soomaaliya oo ka gaabsaday in magacooda la xuso.
Kadib markii shalay madaafiic lagu garaacay xerada Xallane, ayaa madaxda dowladda federalku waxay joojiyeen qorshe ahaa in ay kumanaan shacab ah kula hadlaan fagaaraha isgoyska Soobbe.
Alshabaab ayaa soo saaray wax u eg digniin ku socota madaxda dowladda federalka, kadib markii ay sheegeen inay ku guulaysteen 9 gantaal oo ay la heleen xerada Xallane, iyadoo waxyeelo ay kasoo gaartay 3 shaqaale ah.
Maadaama mas’uuliyiintu ka baaqsadeen inay tagaan fagaaraha xuska, waxaa taalada laga taagay bartamaha Isgoyska lagu soo bandhigay labo gaari oo ku xardhan yihiin sawirka Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha oo ah iyagoo dhiig bixinaya labo sano ka hor.
Previous articleDuqa Muqdisho oo ku dhawaaqay in halkudhiga sanadkaan uu yahay “Ma ooynee waynu aarsanaa”.
Next articleDAAWO:- Siyaasi sheegay in MD Deni uu ku fashilmay Hogaaminta dalka “Deni waa mukhalas u adeega Shisheeye”.
VIDEO XOG Turkiga oo ku Dhawaaqay Talaabada Culus Midowga Yurub Ka...
marqaan - July 8, 2020 0
Daawo Video: Suurtagalnimada in Ciidamada Haramcad ay soo qabtaan Deni &...
Xog: Tirada Dadka ku dhintay rabshadaha Itoobiya oo korortay
Maxaa kusoo kor-dhay Qaraxii ka dhacay Muqdisho!
Ciidamo gadood kasameeyey Gaalkacyo & Hubka culus oo la maqlay dhawaaqiisa.